ဘယ်လန်ဒန်ပန်းခြံကအကောင်းဆုံး VIBES များရှိပါသလဲ ငါတို့ရှိသမျှသည်တကယ်အရေးကြီးသောပစ္စည်းပစ္စယအပေါ် RATED - သတင်း
ဘယ်လန်ဒန်ပန်းခြံကအကောင်းဆုံး vibes များရှိပါသလဲ ငါတို့ရှိသမျှသည်တကယ်အရေးကြီးသောပစ္စည်းပစ္စယအပေါ် rated
အကယ်၍ သင်သည်လန်ဒန်တွင်သော့ခတ်ပိတ်ထားခြင်းခံရသည်ဆိုပါကသင်ယခင်ကထက်မြို့ကြီးပြကြီးများသို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုးစားခြင်း၏နာကျင်မှုကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်ပန်းခြံများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ နှင့်သိမ်းစ်မြစ်အတွက်အခြားလုပ်စရာများစွာမရှိပါ။
သင်တည်ရှိသည်ကိုမသိသောလန်ဒန်ရှိလျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်များနှင့်မကြုံစဖူးသောဆောင်းပါးများစွာကိုလည်းသင်ဖတ်ဖူးပေလိမ့်မည်။ သင်၏သော့ခတ်ထားသောအကောင်းဆုံးပန်းခြံများသည်အချည်းနှီးလမ်းလျှောက်သွားသည်။ ထိုဝှက်ထားသောကျောက်မျက်များသည်ယခုအခါဘုံအသိပညာဖြစ်နေပြီ၊ နောက်ထပ်မအောင်မြင်သောလမ်းလျှောက်မှုကြောင့်သင်ငိုချင်လာသည်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှမကြောက်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ system ကိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးလန်ဒန်ဥယျာဉ်ကြီးတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့လို့ပါ။ မင်းတို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ငါတို့အား lockdown အဆုံးအထိရောက်ဖို့လိုတယ်။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးအစက်အပြောက်များ - လှည့ ်၍ မခံနိုင်သည့် - ပုံမှန်မဟုတ်သောဥယျာဉ်များကို Vibes များပေါ်တွင်အခြေခံထားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်ဖြင့်သင်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောနည်းဖြင့်ကြည့်ရှုရန်ပြင်ဆင်ပါ -
unapologetically ဘက်လိုက်မှုဖြစ်ခြင်း, Heath လန်ဒန်အတွက်အကောင်းဆုံးပန်းခြံဖြစ်ပါတယ်။ အစပြုရန်၊ Royal Parks ကဲ့သို့ပင်နေဝင်ချိန်တွင်မပိတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည် Tory မရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ချစေရုံသာမကညအချိန်တွင်ဤတောင်သူလယ်သမားများသည်ညအိပ်ခလုတ်များဖြင့်လာရန်မလိုလားပေ။ ညဥ့်နက်သန်းခေါင်ယံလမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ညနေခင်းတွင်ကောင်းမွန်သောရှုခင်းနှင့်အတူသောက်ခြင်း။
နောက်ထပ်ကြီးမားသောဆုကြေးမှာပါလီမန် Hill ဖြစ်ပြီးနေဝင်ချိန်တွင် London တစ်ခုလုံးကိုလျစ်လျူရှုရန်အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Heath တွင်မငြင်းနိုင်သောလွတ်လပ်သည့်စိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတောင်တန်းများအားလုံးသည်သင်၏လမ်းလျှောက်မှုကို ပို၍ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေသည်နှင့်အမျှကျယ်ပြန့်ပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောနေရာသည်ကြည့်ရှုရန်အသစ်တစ်ခုအမြဲရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ယောက်ျားလေးများကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသောငွေကြေးပမာဏ - အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ အမှန်စင်စစ်ချမ်းသာ
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာဖတ်နေစဉ်ဘဝမိတ်ဖက်ရှာရန်အလားအလာ - So-so ။ တကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်မယုံနိုင်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမင်းကိုအနိမ့်ဆုံးတောင်ရှာဖို့သူတို့လမ်းကိုလှည့်ပတ်သွားလာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်။
ရေအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ၁၀/၁၀ - အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောရေချိုးကန်များတွင်မသေရန်အာမခံထားရုံသာမကငါးဖမ်းခြင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်အချို့ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။
သောက်ရန်အလားအလာနှင့်မြင့်မားသောသဘောသဘာဝဖြင့်ဝိုင်းရံခြင်း - အလွန်မြင့်မားသည်။ ဤသည်မှာသင်၏အားလပ်ချိန်ကိုရွေးချယ်ရန်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် အကယ်၍ မင်းအလိုရှိလျှင် Heath ဖြစ်ရန်နေရာဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအား Vibes rating: 10/10
Battersea ၏အဓိကအမှတ်အသားမှာ၎င်းသည်ချယ်လ်ဆီးအသင်းတွင်ပြုလုပ်သောပွဲများမှမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ မခံနိုင်လောက်အောင်ကြွယ်ဝသောလူများနှင့် ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်ပြသခြင်းတွင်အပိုတစ်ခုဖြစ်လာခြင်းသည်သင်၏လမ်းပေါ်သို့ရောက်ရှိမည်လားဆိုသည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ရမည်။ သို့သော်သေချာသည်မှာသေချာသည်မှာ၎င်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။
အပြင် Tory စွမ်းအင်အပြင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြစ်ကမ်းနားကိုရောက်နေတဲ့ဘုရားမှာသင်နဲ့သင့်သူငယ်ချင်းတွေအလားအလာရှိတဲ့ပျော်ပွဲစားပွဲတွေ၊ bandstand နဲ့လှေစီးတဲ့ရေကန်၊ ချယ်လ်ဆီးနဲ့အဲလ်ဘတ်တံတားတွေတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဂန္တ ၀ င်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Waitrose ကသင်သိထားသင့်သမျှအားလုံးကိုပြောပြသည်။
ကြုံတွေ့ရနိုင်သောဘဏ္likelyာရေးယောက်ျားလေးအရေအတွက် - အလွန်နည်းသောပမာဏ။ သူတို့ကလုံးဝရှောင်လို့မရဘူးပါပဲ။
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာဖတ်နေစဉ်ဘဝမိတ်ဖက်ရှာရန်အလားအလာ - အလွန်မြင့်မားပြီးမည်သည့်ကံကိုမဆိုသူတို့သည်အရူးနှင့်ကြွယ်ဝသောတီဗွီအဖြစ်အပျက်များဖြစ်လိမ့်မည်။
ရေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ကိုယ်ထည် - ၆.၅ / ၁၀ ။ အဆိုပါ Heath ၏အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ပါဘူးဒါပေမယ့်လှေအိုင်သေချာပါတယ်။
သောက်ရန်နှင့်မြင့်မားသောသဘာဝအားဖြင့်ဝိုင်းရံရရန်အလားအလာ: ဝမ်းနည်းစရာနိမ့် - သင် Grey Goose သို့မဟုတ် champers မသောက်လျှင်သင်ပင်ထွက်ကန်ရလိမ့်မယ်။
ဘုရားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ၈/၁၀ ။ ဒါဟာစိတ်ကို - blowingly ခမ်းနားခြင်းနှင့် All- အစွမ်းထက်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်သူကကျိန်းသေကောင်းသော Vibe နှင့်ပင်ရှိပါတယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ။
ယေဘုယျအား Vibes rating: 6/10
ပန်းခြံတစ်ခု၏လမ်းလျှောက်သူ၊ Hyde သည်လန်ဒန်စိမ်းလန်းသောနေရာဖြစ်သည်။ Kensington ဥယျာဉ်၊ Serpentine၊ Winter Wonderland နှင့် Marble Arch တို့ကိုတစ်နေရာတည်းတွင်စုစည်းထားသည်။ ဒါဟာလန်ဒန်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်perfectlyုံတည်ရှိပြီးပန်းခြံဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် Hyde Park ၏သက်တမ်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်သတ္တဝါများမရှိခြင်းသည်၎င်းကိုလှည့်ပတ်သွားလာရန်အလွန်ပျင်းစရာကောင်းစေသည်။ ဘယ်သူမှဘာမှမရှိတဲ့ရွှံ့နွံထူထပ်တဲ့လယ်ထဲမှာထိုင်ချင်တယ်? ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောလူများ၏နယ်မြေနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိသည်။ တော်ဝင်နတ်ကွန်းများနှင့်စျေးကြီးလွန်းသည့်လက်ဖက်ရည်နှင့်ကိတ်မုန့်တို့ကနေရာကိုလွှမ်းမိုးနေသည်။
ယောက်ျားလေးများကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသောဘဏ္financeာရေးပမာဏ - သင်သည်မှားယွင်းသောအချိန်၌ Hyde Park Corner တွင်သင်ရောက်နေလျှင်သင့်လျော်သောပမာဏဖြစ်သည်။ ပန်းခြံကအရမ်းမိုက်မဲလွန်းနေလို့သင်ကသူတို့ကိုကျိန်းသေပေါက်ထားနိုင်တယ်။
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာဖတ်နေစဉ်ဘဝမိတ်ဖက်ရှာရန်အလားအလာ - အတော်လေးမြင့်မားသည်၊ အထူးသဖြင့်သင်ကန်နှင့်အခြားတစ်နေရာရာတွင်သာယာလှပသောနေလျှင်။
သောက်ရန်အလားအလာနှင့်မြင့်မားသောသဘောသဘာဝဖြင့်ဝိုင်းရံခြင်း - ဒါ - ဒါ။ အခြားပန်းခြံများကကြီးမားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အလားစောစောစီးစီးမပိတ်ပါ။
Duck and Swans rating: ၅/၁၀ ။ ချစ်စရာဘဲ, ကြောက်စရာ Swan ။
London က unis 'ကလေးနှင့်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောနေရာ - Regents သည်လူတိုင်းတွေ့ကြုံခံစားရန်လိုအပ်သည့်လန်ဒန်အဓိကဖြစ်သည်။ လှေစီးနေသောရေကန်၊ ပွဲကြည့်စင်၊ ဥယျာဉ်များ - ပတ်ပတ်လည်တွင်လမ်းလျှောက်ရန်ပိုကောင်းသောနေရာ (Heath ဘေးဖယ်) ။ လူတိုင်းလည်းဒီနေရာမှာထာဝရပျော်ရွှင်နေပုံရတယ်၊ မင်းကလူတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဖြတ်သွားတဲ့ကျပန်းခွေးတွေကိုပြုံးချင်ရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်။
သငျသညျရှိအလုံအလောက်ကြိမ်ဖူးတဲ့အခါ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကမယုံနိုင်လောက်အောင်ပျင်းစရာဖြစ်လာသည်။ သင်ဟာလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုသိတယ်၊ ဒေသခံတွေအားလုံးသိတယ်၊ နှစ်သိမ့်မှုအတွက်ကဖေးခန်းလေးမှာတောင်မကြာခဏလာခဲ့ဖူးတယ်။ ချမ်းသာရမည့်အချိန်သည်တိုတောင်းပြီးချိုသာသည်၊ သို့သော်ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိသော Regents သည်သင်အားအပြစ်ကင်းသောရွှင်လန်းမှုကိုထပ်မံခံစားစေလိမ့်မည်။
ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ဘဏ္financeာရေးယောက်ျားလေးအရေအတွက် - uni Econ ယောက်ျားလေးများအတုအယောင်များသော်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာဖတ်နေစဉ်ဘဝမိတ်ဖက်ရှာရန်အလားအလာ - fuck as as ။ အပိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားအဆိုပြုချက်ကို Vibe များအတွက်နှင်းဆီဥယျာဉ်တော်၌ထိုင်။
ရေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ခန္ဓာကိုယ်: 6/10 ။ အဆိုပါလှေအိုင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပေမယ့်ကျိန်းသေအတွက်ရေကူးဖို့လုံလောက်တဲ့သန့်ရှင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး - အညိုရောင်အရောင်ယခုပန်းခြံရဲ့ကျက်သရေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ယေဘုယျအား Vibes rating: 8/10
ငါတောင်မှသင်တို့ကိုမုသာမသုံးပါလိမ့်မယ်: ဆန့်ကျင်ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်ဘေးမှာဖြစ်ခြင်းမှလွဲ။ , ဒီပန်းခြံကလုံးဝသွားဘာမျှရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာအလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ပန်းခြံတစ်ခုပဲ။ စိန့်ဂျိမ်းစ်ကိုတွေ့မြင်ရပြီး၎င်းသည်အစိမ်းရောင်ပန်းခြံ၏ဓမ္မပွဲကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
ဂူဂဲလ်မြေပုံဖော်ပြချက်အတွက်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှထိုအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအရာများကိုရှာ။ မတွေ့နိုင်ပါ။ သူတို့သည်သစ်ပင်များနှင့်ကုန်းပတ်များဖြင့်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး၎င်းသည်ရှိသမျှအားလုံး၏ရိုးသားသောပုံဖော်မှုဖြစ်သည်။ သငျသညျဘုရင်မကြီးရဲ့ corgis သို့မဟုတ်ဘဝ၏အခက်အခဲများကနေသူတို့ရဲ့သိသိသာသာခွဲထွက်အတွက်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ယူလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်လှပသောတော်ဝင်၏တစေ့တစောင်းကိုဖမ်းယူဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်, ဒီမှာမသွားပါ။
ယောက်ျားလေးများကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသောငွေကြေးပမာဏ - များလွန်းသည်။
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာဖတ်နေစဉ်ဘဝမိတ်ဖက်ရှာရန်အလားအလာ - သင်ကုန်းပတ်ကုလားထိုင်ပေါ်တွင်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းမဟုတ်ပါကကောင်းမွန်သောအလေးသာမှုများ (?)
ရေအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ၁/၁၀ ။ လုံးဝ zilch ။
ယေဘုယျအား Vibes rating: 2/10
အစိမ်းရောင်ပန်းခြံ၏အေးအစ်မ, ဒီပန်းခြံနေဆဲအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်နေစဉ် classy နန်းတော်ပန်းခြံဖြစ်ခြင်း၏ဆက်ပြောသည်ဆုကြေးငွေရှိပါတယ်။ မင်းမှာရုပ်ထုတွေရှိတယ်၊ မင်းမှာလှေတစ်စင်းရှိတယ်၊ လှေတစ်စင်းမှာတံတားတစ်စင်းရှိတယ်၊ ပိုအရေးကြီးတာကတော့မင်းမှာဘဲတွေအများကြီးရှိတယ်။
သို့သော်၎င်းသည်အစိမ်းရောင်ထက် ပို၍ ကောင်းသည်ဆိုသောအချက်က၎င်းသည်အမှန်တကယ်ကောင်းသော Vibes များကိုပေးသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး (ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရလျှင်အလွန်သိသာထင်ရှားသော) Tories ဖြစ်နိုင်ခြေသည်မခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရုံမျှမကထိုနေရာ၌ပစ္စည်းများစွာတော့မပါ ၀ င်ပါ။
ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ဘဏ္boysာရေးယောက်ျားလေးအရေအတွက် - သူတို့ဟာ Green Park မှာနေဖို့ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်လုံခြုံမှုရှိနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူကြီးတွေပေါများကြွယ်ဝပြီးသင်ဘာပိုဆိုးလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
သောက်ရန်နှင့်မြင့်မားသောသဘောသဘာဝဖြင့်ဝိုင်းရံထားရန်အလားအလာ - အကယ်၍ သင်သည်အန္တရာယ်များစွာနေထိုင်ပြီးဒေါင်းနင်းလမ်းနှင့်စကော့တလန်ယာ့ဒ် မှနေ၍ လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောပရိသတ်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်လျောက်ပတ်ပေသည်။ သော်လည်းအဖမ်းခံရဖို့မကြိုးစားပါ။
Duck and Swans rating: ၂/၁၀ ။ သူတို့ကချစ်စရာကောင်းပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှသတိမပြုမိဘဲသတ်ပစ်မယ်။
ယေဘုယျအား Vibes rating: 4/10
အိုကေ၊ ဒါကaရာမခရီးကိုသင်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းတကယ်ကို Richmond ကိုအသွားအပြန်ရောက်တာနဲ့သင် lockdown မှာကြုံတွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးနေ့ကိုအာမခံပေးတယ်။ လန်ဒန်ပန်းခြံများနှင့်မတူသည်မှာသပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းမဲ့ပြီးပျင်းစရာကောင်းလောက်အောင်ပျင်းစရာကောင်းမည်မဟုတ်သော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်ဇာတ်ကောင်၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်လမ်းလျှောက်သည့်လမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။
ဒါဟာကံမကောင်းရုံ posh မိသားစုများကို tweed, Barbour ကုတ်အင်္ကျီများနှင့် wellies ပါဝင်သည်ဟု၎င်းတို့၏တောင်တက်ဂီယာအတွက်လယ်ပြင်နေ့ကရှိသည်ဟုဆိုလိုတာကသင်၏အဖြူ Nike ကိုသင်တန်းဆရာတစ် ဦး မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျဤအားနည်းချက်ကိုလျစ်လျူရှုလျှင်, သို့သော်, လုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။ သမင်များကိုအစက်အပြောက်များ၊ စိုက်ခင်းများသို့လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ရေကန်သို့သွားခြင်းတို့သည်ကြီးမားသောအပိုဆုများဖြစ်သည်။
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာဖတ်နေစဉ်ဘဝပါတနာရှာရန်အလားအလာ - တော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော - ၎င်းသည်ချစ်စရာကောင်းသောဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်သည်သင်၏ဒူးအထိရွှံ့များရရှိပါကကျွန်ုပ်နှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအတိအကျမအော်ဟစ်ပါ။
သမင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ၁၀/၁၀၊ လူတို့ကိုအစဉ်အမြဲသတ်ဖြတ်နိုင်သောအံ့ဖွယ်သတ္တဝါများ။
ယေဘုယျအား Vibes rating: 7/10
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော East End vibes များသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်ပျော်ရွှင်ရခြင်း၌ဤနေရာသည်ရွှေဖြစ်သည်။ စကိတ်ကွင်း၊ ဘုရား၊ ရေကန်၊ ရေကန်၊ ဥယျာဉ်များ၊ စမ်းရေတွင်းများ၊ တင်းနစ်ကွင်းများ၊ ကစားကွင်းများ - ကျွန်ုပ်သည်သွားနိုင်သည်။ အပေါ်။
သင်ကအော်ဟစ်နေသောကလေးများနှင့်မကြာခဏလမ်းပြများ၏မကြာခဏတွေ့မြင်လျစ်လျူရှုနိုင်လျှင်, သင်အချို့သော tinnies နှင့်အတူနေသာသောနေ့၌သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနှင့်သင်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူလန်ဒန်လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှစ်သက်ရာနိုင်ပါတယ်နေရာဖြစ်တယ်။ သင်ကသုံးဆကိန်းဂဏန်းများမရရှိလျှင်သင်သေချင်ကြပါဘူးကြောင်းလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ပိုပြီးဆင်း -to- မြေကြီးတပြင်ပန်းခြံများထဲမှတစ်ခုမ - ဒီတော့ - လူတန်းစား setting ကိုနှင့်အတူတစ် ဦး ဂန္ထဝင်နေရာတစ်ခုပါပဲ။
ယောက်ျားလေးများကြုံတွေ့ရသောငွေကြေးပမာဏ - အလွန်အမင်းနည်းပါးသည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရက်များ
ရေအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ၉/၁၀ - တူးမြောင်း၊ ရေကန်နှင့်ရေကန်ငယ်များအားလုံးသည်တစ်နေရာတည်းတွင်ရှိသည်။ မယုံ။
သောက်ရန်နှင့်မြင့်မားသောသဘာဝကဝိုင်းရံရအလားအလာ: ဤညနေခင်းများအတွက် vibes စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောဖြစ်ကြသည်ကိုသို့သော်သင်ကသူတို့ကိုခံစားရရန်လူအတော်များများရှောင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ဘုရားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ၆/၁၀ ။ လန်ဒန်ငြိမ်းချမ်းရေးစေတီကဲ့သို့အထင်ကြီးလောက်စရာမဟုတ်သော်လည်း၎င်းမှာအလွန်အေးမြသော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကျွန်းငယ်လေးရှိသည်။
ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ထက်ပိုအရှေ့ဘက်တွင်အိုလံပစ်ပန်းခြံသည်အချို့သောသူများအတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသင်မည်မျှမှားသည်။ သငျသညျ coke ဝယ်ချင်ပါသလားမေးမြန်းခြင်း, လမ်းပြတစ်ပင်လယ်မျှော်လင့်ဝင်နှင့်အနည်းငယ်သာမြင်နေစွန့်ခွာခြင်းနှင့်အစားaနြေ္ဒလမ်းလျှောက်ခြင်း၏အတိုဘာမျှမခံစား
တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောအေးတိအေးစက်သော Vibe နှင့်လှပသောတူးမြောင်းများ၊ ပန်းခြံ၏အရှည်၊ ArcelorMittal Orbit နှင့် London Stadium ကဲ့သို့ဂန္ထဝင်မြင်ကွင်းများနှင့်အတူ Stratford ၏မာနနှင့်ရွှင်လန်းမှုသည်၎င်း၏အမည်နှင့်အညီနေထိုင်သည်။ လန်ဒန်ပန်းခြံများ၏ underdog များသောအားဖြင့် uni ကျောင်းသားများကမျှမျှတတရှာဖွေတွေ့ရှိသည်မဟုတ်, သို့သော်ကျိန်းသေသွားရောက်ရန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာဖတ်နေစဉ်ဘဝမိတ်ဖက်ကိုရှာရန်အလားအလာ - အလွန်မြင့်သည် - တူးမြောင်းအနားတွင်ထိုင်။ မစ္စတာညာတစ် ဦး သည်သူ၏မျက်လုံးများမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြင့်သင်အနားဝန်းကျင်ရှိအေးဆေးငြိမ်သက်စွာထိုင်ပါ။ အပိုဆု - အကယ်၍ သင်သည်အိုလံပစ်ရေကူးကန်ဘေးတွင်ချိတ်ဆွဲထားပါက၎င်းတို့သည်အိုလံပစ်ရေကူးပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
ရေအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ၁၀/၁၀၊ တူးမြောင်းများသည်အံ့သြစရာဖြစ်သည်။
ခွေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ၇/၁၀ ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ ဤနေရာတွင်လမ်းလျှောက်သောသူများသည်ကျောင်းသားများမဟုတ်ကြပါ။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသောအကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သည် - သူတို့အများစုသည်ခွေးများပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကအလုပ်လုပ်တဲ့ပညာရှင်တွေကအလုပ်များတတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အဖိုးတန်ခွေးပေါက်စတွေနဲ့ကစားခွင့်မပေးချင်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့်ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီဆိုရင်သင်ဘယ်ကိုသွားရမယ်ဆိုတာအခုသိပြီ။
ယေဘုယျအား Vibes rating: 9/10
ဒီ vibes အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်ကသင့်အားလန်ဒန်ပန်းခြံကြီးများအားပိတ်ပင်ခြင်းမပြီးဆုံးမှီလေ့လာရန်သင့်အားဘဝအသစ်ငှားရမ်းပေးခဲ့သည်ဟုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါဟာအချိန်သည်ဆောင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးရှည်လျားပြီးခက်ခဲသော slog ဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးများအတွက်ပန်းခြံပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်များအတွက်အသက်သွေးကြောဖြစ်ရပြီ, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ Vibe အပြည့်အဝတန်ဖိုးထားရပါမည်အဟောင်း gals အချို့အကြွေးပေးပါရဲ့။